Ambasadaoron’i Maraoka : “Miankina amin’ny Malagasy ny fampandrosoana an’i Madagasikara” | NewsMada
Ambasadaoron’i Maraoka : “Miankina amin’ny Malagasy ny fampandrosoana an’i Madagasikara”
“Miara-manonofy isika, indray andro any: tsy mila intsony ny fiombonambe iraisam-pirenena ny vahoaka malagasy izay manana ny fahaleovantenany sy ny fiandrianam-pireneny. Tsy hiankin-doha sy hiantehitra amin’ny fanampiana ny any ivelany.”
Io no nambaran’ny solontenan’ny masoivoho vahiny, ny ambasadaoron’i Maraoka, Mohammed Amar, teny Iavoloha, omaly. Miankina amin’ny Malagasy ny fampandrosoana an’i Madagasikara. Hatramin’ny nahatongavany, tsy mitsaha-mamaky sy mandre izy hoe fiombonambe iraisam-pirenena, mpamatsy vola, Tahirim-bola eoropeanina ho amin’ny fampandrosoana…
Tsy fampiasa firy any Maraoka ireo teny ireo. Tsotra ny antony: i Maraoka, atosiky ny mpanjaka Mohammed VI, nitarika ho amin’ny fomba rehetra sy nandrisika amin’izay azo atao rehetra, malalaka amin’ny safidy izay hiara-miasa, indrindra amin’ny fiarovana ny fahaleovantena sy ny fiandrianam-pirenena.
Miantehitra amin’ny heriny sy ny hareny ary ny fahaiza-manaony i Maraoka, mialoha ny fanampiana sy ny fanotronan’ny hafa. Manomana ny tontolon’ny ilaina hahazoana mandrisika ireo mpandraharaha hampiasa vola any an-toerana.
Tonga saina amin’ny fahalalana ny zava-misy ny Maraokanina fa tsy miankina amin’ny fampiasam-bola avy any ivelany ny fampandrosoana, ny fampitomboana sy fanatsarana ny fari-piainana. Miankina amin’ny hoaviny sy ny ezaka ataony izany, fanoloran-tena sy fahavononana mba hanatrarana ny tanjona.